Inkonzo yasemva kwentengiso kunye neMeko-iYantai Jiajia Instrument Co, Ltd.
Emva kweNtengiso yeNkonzo kunye neMeko
Nikezela usebenzisa uqeqesho kunye nesikhokelo.
Ixesha lewaranti eli-1. Emva kokuba iimpahla zifunyenwe, umthengi unokunxibelelana nathi malunga nenkonzo yasemva kwentengiso ukuba kukho nayiphi na ingxaki.
Ukuba iimveliso ziqinisekisiwe emva kokufunyanwa, kodwa zinengxaki yokunyamezelana ngexesha lokusetyenziswa, sinokunikezela ngesilinganisi sasimahla, umthengi kufuneka ahlawule iindleko zokuhanjiswa.
Ngenxa yobunzima, kuphela iklasi F2 / M1 okanye ngezantsi inokuba ngu-2nd ilinganiswe.
Umthengi wethu mhle othenge isilinganisi selori esichasene nesiliphu kwaye usithumela imifanekiso yakhe kunye nempahla yethu. Enkosi ngentembeko yakhe kunye nengxelo entle.
* Ubunzima bokulinganiswa kwemitha yokufuma
Imitha yokufuma isetyenziswa kakhulu kwilabhoratri okanye kwinkqubo yemveliso ekufuneka ilinganise umxholo wokufuma msinya. Njengomzi mveliso wamayeza, ishishini lokutya, ishishini lamachiza, ezolimo njl.
Ulinganisa njani imitha yokufuma kunye nobunzima?
Gcina iqhosha le-ZERO ngexesha lobuso be-0.00g.
Xa isikrini sidanyaza, beka ubunzima be-100g kwitreyi yesampulu ngobunono. Ixabiso liya kudanyaza ngokukhawuleza, emva koko ulinde ide ifundwe iye kuma kwi-100.00.
Susa ubunzima, buyela kwimowudi yovavanyo, inkqubo yokulinganisa yenziwe.
Imitha yokufuma entsha kufuneka ilinganiswe ngaphambi kokuba isetyenziswe. Xa isetyenziswa rhoqo, emva koko ifuna ukulinganiswa rhoqo. Ukukhetha ubunzima obuchanekileyo ngokungqinelana nokulinganisa kwemitha yokulinganisa kubalulekile. Fumana iingcebiso apha.
* Ukulinganisa ubunzima bezikali zombane
Ngokubanzi, izikali ze-elektroniki kufuneka zilinganiswe nge-1/2 okanye 1/3 yenqanaba elipheleleyo lesikali. Inkqubo yokulinganisa esemgangathweni ingezantsi:
Vula izikali, ushushubeze imizuzu eyi-15, kwaye ulinganise i-0 bit. Emva koko sebenzisa ubunzima ukulinganisa ngokulandelelana, okunje nge-1kg / 2kg / 3kg / 4kg / 5kg, gcina ufundeko lwanobunzima obulinganayo, inkqubo yokulinganisa yenziwe.
Izikali ezahlukeneyo ziya kufuna udidi lobunzima:
Ibhalansi ngokunyamezelana kwe-1/100000 kunye nenqanaba elincinci le-0.01mg kukulingana kwenqanaba. Kufuneka ilinganiswe ngobunzima be-E1 okanye i-E2.
Ibhalansi yokunyamezelana ngo-1/10000 kunye nobuncinci besikali i-0.1mg iya kusebenzisa ubunzima be-E2 ukulinganisa.
Ibhalansi yokunyamezelana kwe-1/1000 kunye nenqanaba elincinci le-1mg liza kusebenzisa i-E2 okanye i-F1 ubunzima bokulinganisa.
Ibhalansi yokunyamezelana ngo-1/100 kunye nobuncinci besikali i-0.01g iya kusebenzisa ubunzima be-F1 ukulinganisa.
Isikali esine-1/100 yokunyamezelana kunye nesilinganiselo esincinci se-0.1g siya kusebenzisa ubunzima be-M1 ukulinganisa.
Izikali kunye nezilinganisi zinokulinganiswa ngexabiso elifanayo kunye nobunzima beklasi.
Uvavanyo lokulayisha ikheshi
Yindlela eqhelekileyo yovavanyo lokulayisha ikheshi. Uvavanyo lwezinto ezilinganisayo zekheshi kufuneka lusebenzise ubunzima. Umlinganiso we-lifti yenye yeeparameter ezibaluleke kakhulu kwisinyusi sokutsala, kunye neparameter ebalulekileyo ekhuselekileyo, ethembekileyo, ekhululekile kunye nokusebenza kwamandla kwilifti. Njengomsebenzi obalulekileyo, uvavanyo lwebhalansi lubandakanyiwe kwiprojekthi yovavanyo lokwamkelwa. Ubunzima be-20kg yentsimbi "iintsimbi ezixande" (M1 OIML standard weight) with 1g tolerance is used for elevator testing. Ngokubanzi, iinkampani zelifti ziya kuxhobisa ngobunzima besinyithi obuncinci obuqala kwitoni enye ukuya kwiitoni ezininzi.
Iziko elikhethekileyo lokuhlola izixhobo likwafuna ukusebenzisa ubunzima beentsimbi xa kuhluzwa ilifti. Ubukhulu obuqhelekileyo zezi: I-20KG yentsimbi enobunzima (ilungele ukusebenziseka, kulula ukuyiphakamisa), kwaye okwesibini ezinye iiyunithi zokuhlola ziya kukhetha uhlobo lwe-25kg yentsimbi.
* Ukulinganiswa kwesisindo somsebenzi onzima / isikali selori
Ukulinganisa kwiikona: Khetha ubunzima kwixabiso le-1 / 3X (X endaweni yesisindo sobunzima bebonke), yibeke kwiimbombo ezine zeqonga kwaye ulinganise ngokwahlukeneyo. Ukufundwa kweekona ezine akunakuphuma kunyamezelo oluvumelekileyo.
Umlinganiso wokulinganisa: Khetha ubunzima kwi-20% X kunye ne-60% X, ibeke kwiziko le-weightbridge ngokwahlukeneyo. Emva kokuthelekisa ukufundwa kunye nexabiso lobunzima, ukuphambuka akufuneki kudlule kunyamezelo oluvumelekileyo.
Ukulinganiswa komgama: Khetha i-20% X kunye ne-60% X yamatye, beka ubunzima obuqhelekileyo embindini wesilinganisi sokulinganisa, ulinganise ngokwahlukeneyo, kwaye ukufundwa kufanele kuthelekiswe nobunzima obuqhelekileyo. Ukuphambuka akufuneki kudlule kwimpazamo evumelekileyo.
Ukubonisa ixabiso lokulinganisa: Umndilili wokulinganisela okupheleleyo kumanqanaba alinganayo ali-10, setha ixabiso eliqhelekileyo ngokokutsho kwawo, beka ubunzima obuqhelekileyo embindini we-weightbridge, emva koko urekhode ukufundwa
* Ukulinganiswa kwezikali zemfuyo
Izikali zemfuyo zisetyenziselwa ukulinganisa imfuyo. Ukugcina ukuchaneka kwezikali, ubunzima bentsimbi bunokusetyenziselwa ukulinganisa izikali zemfuyo.
* Isikali selori yePallet
Idityaniswe kwilori yesandla pallet kunye nezikali kunye. Ngezikali zelori pallet, ukuthutha kunye nobunzima kunokwenziwa ngaxeshanye. Yenza izinto ezisendlini zisebenze ngakumbi ngeendleko eziphantsi.
* Izikali ze-Crane
Izikali ze-Crane zisetyenziselwa ukulinganisa umthwalo oxhonyiweyo, kunye nobubanzi obahlukeneyo kunye nomthamo wobunzima, zinika isisombululo sengxaki ngendlela yokulinganisa umthwalo ongagunyaziswanga ongaphantsi kwemeko zeshishini. , urhwebo, iindibano zocweyo, njl., njengokulayisha, ukothula, ukuhambisa, ukulinganisa, ukuhlalisa, njl njl.
Isikali sokulinganisa sokulinganisa, Ishedi ye-Shear Bead Cell, UkuLungiswa koBunzima beSeti, Ubunzima obuqinisekisiweyo, Ubunzima bokulinganiswa kwamaNqanaba amaDigital, UkuLungiswa kweMisa,